Shiinaha Truck Telescopic Haydarooliga dhululubada warshad iyo saarayaasha | Xinrun
1.Telescopic dhululubo Haydarooliga sidoo kale loo yaqaan silsilad-Haydarooliga multi-stage. Waxay ka kooban tahay laba ama dhowr nooc oo silsilado bistoolado ah, oo inta badan ka kooban madaxa silsiladda, foosto silsilad ah, gacmo-gashi, bistoolad iyo qaybo kale. Waxaa jira dekedo laga galo iyo kuwa laga baxo a iyo B labada daraf ee foosto dhululubo ah. Marka saliidu soo gasho dekedda a iyo saliida ka soo laabato dekedda B, bistoolada heerka koowaad oo leh aag wax ku ool ah oo weyn ayaa la riixayaa, ka dibna bistoolada heerka labaad ee yar ayaa dhaqaaqaysa. Sababtoo ah heerka socodka ee dekedda a waa mid joogto ah, bistooladda leh aagga waxtarka weyn leh waxay leedahay xawaare hoose iyo riixitaan sare, haddii kale, xawaare sarreeya iyo riixitaan hooseeya. Haddii saliid ku jirto dekedda B iyo soo celinta saliidda dekedda a, bistooladda labaad waxay ku laaban doontaa barta ugu horreysa marka hore, ka dibna bistooladdii ugu horreysay ayaa soo laaban doonta
Astaamaha silsiladda telescopic ee Haydarooliga waa: istaroogga shaqada wuu dheeraan karaa, waana la gaabin karaa marka uusan shaqeynin. Waxay ku habboon tahay munaasabadaha meesha rakibidda ay xadidan tahay iyo shuruudaha socdaalku aad u dheer yahay, sida kor u kaca telescopic ee tipper truck iyo wiish. Marka dhululubada korontada ku shaqeysa ee telescopic-ka ay u fidiso tallaabo tallaabo, aagga shaqada ee wax ku oolka ah si tartiib tartiib ah ayuu u yaraadaa. Marka heerka socodka aqbasho uu joogto yahay, xawaaraha kordhinta ayaa si tartiib tartiib ah u kordha; marka culeyska dibedda uu joogto yahay, cadaadiska shaqada ee silsiladda korantada ayaa si tartiib tartiib ah u kordha. Kordhinta silsiladda korontada ku shaqeysa ee telescopic-ga ah waxay kuxirantahay cadaadiska saliida, fooshana waxay kuxirantahay culeyska naftiisa ama culeyskiisa. Sidaa darteed, waxaa loo adeegsadaa kiiska foorashada ama wareegga toosan ee birta dhululubo ..
3.a. Isku xirnaanta dhululubo iyo dhululubo
Waxaa jira noocyo badan oo xiriir ah oo ka dhexeeya silsiladda iyo silsiladda, sida iskuxidhka usha jiida, isku xirnaanta flange, isku xidhka giraan badhkiisa, isku xidhka alxanka. Xiriirinta alxanka halkan ayaa lagu xushay. Nooc ka mid ah
b. Xiriirinta udhaxeysa bistoolada iyo bistoolada
Xidhiidhka ka dhexeeya bistoolada iyo usha bistoolada ayaa inta badan qaadata qaab dhismeedka isku xidhka dunta iyo isku xidhka qaabdhismeedka isku xidhka furaha. Qaab dhismeedka isku xirka dunta ayaa ah mid fudud oo wax ku ool ah, waana mid si ballaaran loo adeegsado; farsamaynta isku xidhka furaha isku xidhka ayaa ku habboon dhululubo leh cadaadis shaqo oo weyn iyo gariirka weyn ee mashiinnada shaqada. Sidaa darteed, qaabdhismeedka isku xirka dunta ayaa laga soo xulay arrimo kala duwan.
c. Cunsurka nabadgelyada ee aaladda dhululuboyinka
Baloogga silsiladda, cadaadiska Haydarooliga, xoogga farsamada iyo cunsuriyadda nabadgelyada dhammaantood waxay saameyn ku leeyihiin boodboodka. Cilad-darida cillad-hawleedka cadaadiska sare iyo luminta awoodda shaqada ee caadiga ah ayaa inta badan lagu muujiyaa saddex nooc: dhibaatada xoogga, dhibaatada adkaanta iyo dhibaatada tayada, tan ugu muhiimsanna waa dhibaatada xoogga. Si loo hubiyo xoogga birta dhululubo, waa inaan tixgelinaa qodobka nabadgelyada ku habboon
Hore: Dhululubada Haydarooliga
Xiga: Baabuur Jack
Qalabka Mashiinka Dhismaha Haydarooliga
Silsiladda Gawaarida Gawaarida Qiiqa
Qalabka Fayadhowrka Bay'adda ee Haydarooliga